Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.1 Big
Ny singa malaza indrindra amin'ny loharanom-baovao lehibe dia ny hoe BIG izy ireo. Betsaka ny taratasy, ohatra, manomboka amin'ny fifanakalozan-kevitra - ary indraindray mirehareha - momba ny habetsaky ny angona nodinihan'izy ireo. Ohatra, taratasy iray navoaka tao amin'ny siansa momba ny fampiasana ny teny ampiasaina amin'ny teny ampiasain'ny teny ampiasaina ao amin'ny Google Books corpus dia nahitana ity manaraka ity (Michel et al. 2011) :
"Ny vatantsika [corps] dia misy fiteny 500 lavitrisa, amin'ny teny Anglisy (361 lavitrisa), Frantsay (45 lavitrisa), Espaniôla (45 lavitrisa), Alemana (37 lavitrisa), Sinoa (13 miliara), Rosiana (35 lavitrisa) (2 lavitrisa). Ny asa tranainy indrindra dia navoaka tamin'ny taona 1500. Ny taompolo voalohany dia aseho amin'ny boky vitsivitsy isan-taona, ahitana teny maromaro an'arivony. Ny 1800 dia mitombo 98 tapitrisa isan-taona ny corpus; tamin'ny taona 1900, 1,8 miliara; ary tamin'ny 2000, 11 miliara. Ny vatan'ny olona dia tsy azo vakiana. Raha niezaka ny hamaky afa-tsy amin'ny fiteny Anglisy fotsiny ianao amin'ny taona 2000 fotsiny, dia mety haharitra 80 taona eo ho eo amin'ny fehezan-teny 200 mahery / min, tsy misy fampidirana sakafo na torimaso. Ny fizotry ny litera dia avo 1000 heny noho ny homamiadan'ny olombelona: Raha nanoratra tamim-pahamarinana ianao, dia ho tonga ny volana ary hiverimberina in-10. "
Ny haben'ity angon-drakitra ity dia tsy isalasalana fa mahavariana fa ny ekipan'ny Google Books dia namoaka ireo angona ireo ho an'ny daholobe (raha ny marina, ny sasany amin'ireo hetsika any amin'ny faran'ity toko ity dia mampiasa ny angon-drakitra). Saingy, isaky ny mahita zavatra tahaka izao ianao dia tokony manontany: moa ve sa ireo rakitra rehetra ireo dia manao na inona na inona? Mety ho nanao fikarohana toy izany ihany ve izy raha toa ka afaka mandeha any amin'ny Moon sy ny miverina indray ny angona indray mandeha? Ahoana raha tsy afaka hahatratra ny tampon'ny Tendrombohitra Everest na ny tampon'ny Eiffel Tower?
Amin'ity tranga ity, ny fikarohana ataon'izy ireo, raha ny marina, dia mahita ny zavatra sasany izay mila fehezan-teny midadasika mandritra ny fotoana maharitra. Ohatra, ny zavatra iray fantany dia ny evolisiona ny fitsipi-pitenenana, indrindra ny fiovan'ny toetran'ny matoanteny mifangaro. Satria tsy dia fahita firy ny matoanteny tsy ara-dalàna sasany, ny ankamaroan'ny angon-drakitra dia mila mamantatra ny fiovana rehefa mandeha ny fotoana. Matetika anefa, ny mpikaroka dia toa mampiseho ny habetsaky ny loharanom-kaonty lehibe ho toy ny fiafarana - "jereo ny tahiry be dia be azoko", fa tsy fitaovana iray amin'ny tanjona ara-tsiantifika lehibe kokoa.
Raha ny zava-niainako, ny fandalinana ny hetsika mahalana dia iray amin'ireo tetikasa telo miavaka izay ahafahana mamela malalaka ny daty lehibe. Ny faharoa dia ny fandalinana ny heterogeneity, araka izay asehon'ny fanadihadiana nataon 'i Raj Chetty sy ireo mpiara-miasa (2014) momba ny fifandraisana ara-tsosialy any Etazonia. Taloha, mpikaroka marobe no nianatra ny fifandraisana ara-tsosialy amin'ny alalan'ny fampitahana ny vokatry ny fiainan'ny ray aman-dreny sy zanaka. Ny fitadiavana tsy tapaka amin'ity boky ity dia ny fahombiazan'ny ray aman-dreny manana zanaka matotra, fa ny herin'io fifandraisana io dia miovaova amin'ny fotoana sy any amin'ny firenena (Hout and DiPrete 2006) . Vao haingana anefa, ny Chetty sy ireo mpiara-miasa dia afaka nampiasa ny antontan-taratasy momba ny hetra avy amin'ny olona 40 tapitrisa mba hanombanana ny tsy fitoviana amin'ny fifindrahindran'ny fifankatia manerana ny faritra any Etazonia (sary 2.1). Nahita, ohatra, izy ireo fa ny fahombiazan'ny zaza iray tonga amin'ny tendrony avo indrindra amin'ny fizarana vola miditra avy amin'ny fianakaviana ao amin'ny tendrony ambany dia eo amin'ny 13% any San Jose, Californie, fa eo amin'ny 4% fotsiny any Charlotte, Caroline Avaratra. Raha mijery ny isa 2.1 ianao, dia mety hanomboka hanontany tena ianao hoe nahoana no mihamitombo kokoa ny fifindra-monina any amin'ny toerana sasany noho ny hafa. Nanontany tena i Chetty sy ireo mpiara-miasa aminy, ary hitany fa tsy misy fonenana mitoka-monina ny habaka avo lenta, ny tsy fitovian-toeran'ny vola, ny sekoly ambaratonga fototra, ny renivola ara-tsosialy, ary ny fitomboan'ny fianakaviana. Mazava ho azy, ireo fiarahamonim-pirenena ireo dia tsy mampiseho fa miteraka fahatsapana avo lenta kokoa ireny tranga ireny, saingy manolotra soso-kevitra azo atao izy ireo izay azo jerena amin'ny asa bebe kokoa, izay i Chetty sy ireo mpiara-miasa no nanao ny asa taty aoriana. Mariho fa ny lanjan'ny data dia tena zava-dehibe amin'ity tetikasa ity. Raha nampiasa ny firaketana an-tsoratry ny olona 40.000 i Chetty sy ireo mpiara-miasa fa tsy 40 tapitrisa, dia tsy ho afaka nanombantombanana ny tsy fitoviana eo amin'ny faritra izy ireo ary tsy ho vitan'izy ireo mihitsy ny nanao fikarohana taorinan'ny fiezahana hamantatra ireo rafitra izay mamorona io fiovaovana io.
Sary 2.1: Famaritana ny mety ho an'ny ankizy ny hahatratra ny 20% ambony amin'ny fizarana vola miditra amin'ny ray aman-dreny eo amin'ny 20% ambany (Chetty et al. 2014) . Ny tombana eo amin'ny sehatra isam-paritra, izay mampiseho ny tsy fitoviana, dia mitarika ho amin'ny fanontaniana mahaliana sy manan-danja izay tsy mipoitra avy amin'ny tomban'ezaka iraisam-pirenena. Ireo tombana isam-paritra ireo dia azo natao an-tapitrisany satria ireo mpikaroka dia nampiasa loharanom-baovao lehibe iray: ny firaketana an-kibon'ny olona 40 tapitrisa. Noforonina avy amin'ny angona hita ao amin'ny http://www.equality-of-opportunity.org/.
Farany, ankoatra ny fandalinana hetsika tsy fahita firy sy fandinihan-tena ny fandinihan-tena, dia mamela ny mpikaroka hahafantatra ny fahasamihafana kely ihany koa ny mpikaroka. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny fifantohana amin'ny angona goavana amin'ny indostria dia mikasika ireo fahasamihafana madinika ireo: azo antoka fa ny fahasamihafana misy eo amin'ny 1% sy ny 1.1% sivana amin'ny vidiny amin'ny adiresy dia afaka mandika vola an-tapitrisany dolara amin'ny fidiram-bola fanampiny. Ao amin'ny sehatra siantifika sasantsasany, ny fahasamihafana madinidinika toy izany dia mety tsy dia manan-danja loatra, na dia manan-danja aza izy ireo (Prentice and Miller 1992) . Saingy, amin'ny toe-javatra politika sasany dia mety ho lasa zava-dehibe izy ireo rehefa jerena amin'ny ankapobeny. Ohatra, raha misy fepetra roa momba ny fahasalamam-bahoaka ary ny iray dia mahomby kokoa noho ny iray hafa, dia ny fananganana ny fidirana amin'ny fomba mahomby kokoa dia mety hahatratra an'arivony fanampiny velona.
Na dia zava-tsarobidy aza ny fahabangana amin'ny ankapobeny rehefa ampiasaina tsara, dia voamariko fa indraindray dia mety hitarika hadisoana iray izy. Noho ny antony marimaritra iraisana, dia toa mitarika ny mpikaroka ny tsy firaharahiana ny tsipiriany. Na dia mampihena ny filana ny fiahiahiana ny hadisoana tsy fetezana aza ny bigness, dia mampitombo ny filàna ny fiahiahiana momba ny fahadisoana efa misy, ny karazana fahadisoana izay horesahiko etsy ambany izay mitranga amin'ny fanitsakitsahana ny angon-drakitra. Ohatra, amin'ny tetikasa iray no hamariparitako ato amin'ity toko ity, nampiasa hafatra nalefa tamin'ny 11 septambra 2001 ny mpikaroka mba hamoahana ny fihetseham-po mampihetsi-po amin'ny fihetsik'ireo mpampihorohoro (Back, Küfner, and Egloff 2010) . Satria maro ireo hafatra ireo mpikaroka, dia tsy nila niahiahy izy ireo raha toa ka nanazava ny fomba amam-panaon'izy ireo na ny fampitomboana ny hatezerana nandritra ny andro. Nisy ny tahirin-kevitra be dia be ary mazava tsara ny lamina fa ny teti-pitsipika statistika rehetra dia nanolotra hevitra fa tena fakan-tahaka izany. Saingy, ireo teti-pandrefesana statistika ireo dia tsy nahalala ny fomba namoronana ny angona. Raha ny tena izy, dia hita fa ny ankamaroan'ny lamina dia azo avy amin'ny bot iray tokana izay nahatonga hafatra maro tsy misy dikany nandritra ny andro. Ny fanesorana ity bot iray ity dia nanimba tanteraka ny sasantsasany tamin'ireo fanalahidy hita tao amin'ny taratasy (Pury 2011; Back, Küfner, and Egloff 2011) . Raha ny marina fotsiny, ireo mpikaroka izay tsy mihevitra ny hadisoana ara-toe-javatra dia mety hampiasa ireo tahiry lehibe ireo mba hahazoana manombatombana ny isan'ny tsy manan-danja, toy ny fihetseham-po mampihetsi-po amin'ny hafatra tsy misy dikany novolavolain'ny bot.
Raha ny famaranana, ny tahiry lehibe dia tsy tanjona ao anatiny, fa afaka mamela karazana fikarohana karakarainy izy ireo, anisan'izany ny fianarana hetsika henjana, ny fiheverana ny heterogeneity, ary ny fisian'ny fahasamihafana madinika. Ny finday goavana koa dia toa mitarika mpikaroka vitsivitsy tsy hiraharaha ny fomba namoronana azy ireo, izay mety hitarika azy ireo hahazo tombony amin'ny ankamaroan'ny olona.